Dungeon & Dragons iray manontolo amin'ny findainao: Warriors of Waterdeep | Androidsis
Mpiady amin'ny rano mandroaka tranomaizina & dragona fa mijanona lavitra
Ny Warriors of Waterdeep dia misy ao amin'ny Play Store miaraka amina fandraisana lehibe avy amin'ny vahoaka gamer avy amin'ny Android. RPG iray miaraka amin'ny fankatoavana ny maha-Dungeon & Dragons, na dia lavitra ny andrasan'ny olona aza izany, indrindra rehefa manana ny fototry ny lalao milalao andraikitra isika rehefa mahatakatra azy ireo.
Ny tantara dia mitondra antsika any Waterdeep, tanàna lehibe indrindra amin'ny morontsiraka Sword ary atahoran'ny hery matanjaka. Soa ihany fa azontsikaManampy azy ireo amin'ny fiantsoana an'i Laeral Silverhand ary mankanesa any amin'ny làlan'ny fahavalo izay te-hanatratra ny vavahadin'ny tanàna.
1 Saingy avelany hilalao izy, na dia miaraka amin'ity marika ity aza ...
2 Ady tsotra iray izay tsy misy an'io fikitika manokana io
3 Ny fiandohan'ny tabilao
Saingy avelany hilalao izy, na dia miaraka amin'ity marika ity aza ...
Ny olan'ny rahoviana manao ny marika Dungeons & Dragons ianao dia ny antenaina rehetra. Ary ny fiandrasana ny zava-drehetra dia midika fa satria tsy mahatratra ny antenaina ianao, dia manjary tondraka ny mpankafy ny karazana fahadisoam-panantenana, noho izany dia manomboka mihintsana ny tsikera ratsy.
Raha Warriors of Waterdeep dia lalao hafa amin'ny anarana hafa Azontsika atao ny manome toky anao fa hanana isa tsara kokoa amin'ny Play Store izy io, saingy izany no izy. Lohateny vaovao ho an'ny Android izay mampiseho fahombiazana ara-teknika tsara, na dia tsy manana io teboka manokana io aza izy.
Miorina amin'ny ady miorina amin'ny turn-turn sy ireo boaty mandroba izany dia hanome làlana hahafahana manatsara ireo mahery fo isan-karazany izay hangoninay. Izany hoe miresaka freemium madio isika izay ilana tratra hahafahana mahazo farantsa, fiadiana ary maro hafa.
Ady tsotra iray izay tsy misy an'io fikitika manokana io
Ahoana raha afaka mirehareha ianao dia ny fahavalo isan-karazany izay ho hitantsika amin'ny ambaratonga samihafa. Manana goavam-be mirehitra isika, ny undead ary ireo hobgoblins masiaka izay hanasarotra antsika. Ny ady dia mifototra amin'ny fananana hetsika roa hatao: hetsika sy fanafihana. Ireo fahavalo dia hiteraka eo amin'ny solaitrabe mba hahafahantsika mihetsika raha manafika sy miaro tena isika.
Rehefa mandalo ny ambaratonga voalohany isika dia afaka mamoha mahery fo vaovao. Soa ihany fa azontsika atao ny misafidy roa, toy ny mitranga amin'ny ambaratonga mitovy ihany fa aorian'ny fahavalo voalohany dia hiatrika ny safidy mandeha miankavia na miankavanana isika. Tsy hoe hanova ny kofehy iraisan'ny tantara izany, fa farafaharatsiny dia karazany vitsivitsy ho an'ireo karazana lalao ireo.
Tokony hatsarantsika koa ny maherifontsika tsirairay. Zavatra mora satria haseho antsika izy ireo ireo famantarana mamirapiratra ireo izay saika hamonjy antsika tsy handany fotoana. Farafaharatsiny tsy misy fanafihana mandeha ho azy izany satria amin'ny lalao porridge hafa no mitranga. mivelatra toy ny sombin-javatra.
Ny fiandohan'ny tabilao
Iray amin'ireo teboka tianay ny Warriors of Waterdeep dia ny fomba fidirana voalohany amin'ny ambaratonga rehefa mihetsika amin'ny iray amin'ireo latabatra ny fakantsary aiza ireo maherifontsika ka manome fialamboly kely amin'ilay sari-tany. Fikitika iray tany am-boalohany izay tianay ho hita bebe kokoa amin'ny lalao miantsoantso ho an'ny asa bebe kokoa sy ireo fikitika manokana izay hampientanentana ny mpankafy Dungeon & Dragons.
Niasa tsara ara-teknika tsy manana an'io teboka manokana amin'ny sarimiaina sy ny vokany. Ary jereo fa mahita boss lehibe farany isika, saingy maharitra lavitra noho izany izy ireo; Etsy andanin'izany, tsy takatra fa kely ny vidintsika handresena ny sefo farany voalohany noho ny mpanohana azy. Hanao ozona izy ireo ary tsy manome zavatra bebe kokoa ny mahantra ...
Ny Warriors of Waterdeep dia lavo dingana iray miala amin'ny lalao tsara kokoa, na dia tsy ho tsy ampy mpankafy aza izy ireo, satria amin'ny ankapobeny dia tena tsara izany. Fa ny efa voalaza, ny mitondra ny marika D & D dia manana ny azy ary tsindry tsy hain'izy ireo refy handefasana azy amin'ny Android.
Mpiady amin'ny Waterdeep
Maha-tranomaizina & dragona
Misy ifandraisany amin'ny fotoana fohy
Tsy misy hetsika bebe kokoa sy ny vokatra manokana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Mpiady amin'ny rano mandroaka tranomaizina & dragona fa mijanona lavitra
Ahoana ny fananganana telefaona fifandraisana maika amin'ny Android